Ukufumana kwakhona uLost Ii-imeyile zangaphandle kunye nezinto ngenxa yokuvumelaniswa kwefowuni ephathwayo
Ikhaya iimveliso DataNumen Outlook Repair Ukufumana kwakhona uLost Ii-imeyile zangaphandle kunye nezinto ngenxa yokuvumelaniswa kwefowuni ephathwayo
Ukufumana kwakhona uLost Ii-imeyile zangaphandle kunye nezinto ngenxa yokuGqithiswa kwefowuni!
Xa ungqamanisa ifowuni yakho ephathekayo kunye ne-Outlook kwi-Outlook yakho kwideskithophu, kunye nesoftware efana ne-ActiveSync okanye iZiko leSixhobo seWindows, ngamanye amaxesha uya kuphulukana nee-imeyile kunye nezinye izinto. Ii-imeyile zoqobo kunye nezinto ziyacinywa kwi-Outlook kwidesktop, kodwa aziveli kwifowuni yakho ephathekayo. Oku kwenzeka ngenxa yezi zizathu zilandelayo:
Iimpazamo zenzeka kwinkqubo yolungelelwaniso. Umzekelo, ngenxa yempazamo yonxibelelwano lwenethiwekhi, izinto ziyacinywa kwidesktop kodwa azigqithiselwanga kwiselfowuni ngokufanelekileyo.
Isiphene sesoftware yokuvumelanisa. Umzekelo, i-ActiveSync inokucima abafowunelwa kwi-desktop yakho ye-Outlook kodwa ingabadluliseli kwifowuni yakho ephathwayo.
Kwimeko enjalo, usenokubuyisa i-lost imeyile kunye nezinto nge DataNumen Outlook Repair, ngoku Landelayo:
Yiya kwikhompyuter yakho yedesktop.
Khetha ifayile ye-PST kwi-Outlook yakho kwikhompyuter yedesktop, njengefayile yePST ekufuneka ilungisiwe.
Cwangcisa imveliso echanekileyo yegama lefayile yePST ukuba kukho imfuneko.
Lungisa ifayile ye-PST yomthombo. DataNumen Outlook Repair iya kuskena kwaye ifumane ii-imeyile kunye nezinye izinto lost ngexesha lokudibanisa phakathi kwefowuni ephathekayo kunye nekhompyuter yedesktop.
Emva kwenkqubo yokulungisa, ungasebenzisa i-Outlook ukuvula ifayile ye-PST emiselweyo kwaye ufumane zonke i-lost ii-imeyile kunye nezinye izinto zibuyiselwe kwiindawo zazo zangaphambili.
Ukuba awukwazi ukufumana izinto kwiindawo ezigcinwe kuzo, unokuzama ukuzifumana ngezi ndlela zilandelayo:
1.1 Zifumane kwiifolda "Efunyenweyo_Groupxxx". I lost izinto zinokuphathwa njenge lost & Izinto ezifunyenweyo, ezifunyenweyo zaza zafakwa kwiifolda ezibizwa ngokuba yi “Recovered_Groupxxx” kwifayile ye-PST emiselweyo.
1.2 Ukuba uyazi ezinye iipropathi zezinto ezifunekayo, umzekelo, umxholo we-imeyile, amanye amagama aphambili kumzimba we-imeyile, njl., Emva koko ungazithatha ezi ndawo njengezinto zokukhangela, kwaye usebenzise umsebenzi wokukhangela we-Outlook ukukhangela Izinto ezifunekayo kwifayile yePST epheleleyo. Ngamanye amaxesha, lost Izinto zinokuphinda zifumaneke kwaye zibekwe kwezinye iifolda okanye iifolda ezinokulamlarary amagama. Ngomsebenzi wokukhangela we-Outlook, unokuzifumana ngokulula.
Ungaqaphela izinto eziphindiweyo ezingasetyenziswanga kwiifolda "eziFunyenweyo_Groupxxx". Nceda ungabahoyi. Kungenxa yokuba xa i-Outlook igcina into, inokwenza iikopi ezizezinye ngokungangqinelaniyo. DataNumen Outlook Repair inamandla kangangokuba inokuphinda ikhuphe ezi kopi kwaye ibaphathe njenge-lost & Izinto ezifunyenweyo, ezifunyenweyo zaza zafakwa kwiifolda ezibizwa ngokuba yi “Recovered_Groupxxx” kwifayile ye-PST emiselweyo.